Hetsika Free Fm : raharahan’ny mpanongam-panjakana very fihinana | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Hetsika Free Fm : raharahan’ny mpanongam-panjakana very fihinana
Voaporofo androany teny analakely fa alahelo momba ny fanilihana no tena andraisan’ny mpanao politika sasantsansany anjara amin’ity hetsika tarihin’i Lalatiana sy Fidèle ity. Ny fahitana izany Isaac Ramamonjisoa izany teny an-toerana dia efa nahafahana nanaporofo izany. Manginy fotsiny ny avy amin’ny Otrikafo izay efa niray petsapetsa tamin’ny fanonganam-panjakana mihitsy sangy tsy nahita ravin’avaratra noho ny avy eo. Ny lahatenin’ny sekretera jeneralin’ny antoko Avotra ho an’ny Firenena rahateo dia nahafantarana fa isan’ireo nitaky ny « fanovana » tamin’ny taona 2009 izy ireo.
Mbola « fafy lainga » …
Nifotoran’ny teniny izy mianadahy mpanentana androany hany ka niaka-pofona fatratra ery. Rehefa tsy dia nahazo olona izy ireo tamin’ny hetsika nataony dia niezaka ny nanarina tamin’ny fanambarana izay nataon’ny COSOFAM na ny fikambanan’ny manamboninahitra lefitra eto Madagasikara. Io no nezahina nampandry adrisa tamin’ireo « mpanaraka » azy tonga teny amin’ny Kianjan’ny 13 Mey androany. Hariva ihany anefa ny andro fa tsy hita izay tohin’io fanambarana io na dia efa nataon’ireto naman’i tgv ireto toy ny hitondra rivo-doza mihitsy ny fampitana azy ny atoandro. Sorena noho izany ry zareo ka dia nisesisesy ny farateny tao amin’ny fm 104.2 io hariva io. Mazava anefa fa ny fanohizana ny fanaratsiana ny Filoha RAVALOMANANA sy ny mpanara-dia azy no tena tsy nampahomby ny hetsika ka nitarika ny fahasorenena tamin’izy ireo sahady ny maraina. Androany koa dia namafisin’izy ireo tao amin’ny fandaharany fa tsy levon’ny vavony ny hifampiresahan’izy mianaka voakasika mivantana sy voalohany amin’izao krizy izao. Ary mbola tena tsy azony leferina ny hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara. Izany hoe, raha fehezina dia tsy hamaha krizy no tanjon’i Lalatiana Rakotondrazafy sy Fidèle Razara Pierre fa ny hamorona krizy vaovao tsotra izao. Koa asakasak’ireo mpandala ny ara-dalàna mitady hovoasarika mankany amin’ny lalan-dratsy.